चम्किलो, मुलायम र सफा अनुहारका लागि सरल उपाय - Sakaratmak Soch
चम्किलो, मुलायम र सफा अनुहारका लागि सरल उपाय
पानीको वाफ लिने चलन प्राय सबैतिर छ । खासगरी रुँघाकोखीले गाँजेको अवस्थामा त्यसबाट राहत पाउन पानी उमालेर त्यसको वाफ लिने गरिन्छ । प्राकृतिक उपचारको प्रभावकारी विधी हो यो, जो हानिरहित पनि छ । पानीको वाफ लिँदा त्यसको तापले फोक्सो खुल्छ । रुँघा निको हुन्छ । पानीको वाफ लिनु झन्झटिलो छैन । खर्चिलो पनि छैन । न समय लाग्छ, न श्रम । सजिलै ढंगबाट यसले प्रभावकारी काम गर्छ ।
छालाको सौन्दर्यका लागि
पानीको वाफले रुँघामा मात्र राहत दिदैन । यसले अनुहारको चमक बढाउन पनि काम गर्छ । अनुहारको सौन्दर्यका लागि पानीको वाफ लिने प्रचलन पनि नभएको होइन ।
१. बन्द छिद्रहरु खोल्छ
३. डण्डीफोरबाट बचाउँछ
४. छालालाई कसिलो बनाउने
करिनाको टिप्स : यसरी बनाउने घरेलु फेसप्याक
सौन्दर्यको कुरा : घरेलु विधिबाट यसरी गर्न सकिन्छ स्क्रब